Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo gacanta u galay ciidamada maamulka Somaliland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo gacanta u galay ciidamada maamulka Somaliland
July 18, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Xildhibaan Maxamed Faarax Aadan (Can-jeex). Sawirka: Puntland Post.
Garoowe-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan golaha baarlamaanka dowlada Puntland ayaa gacanta u galay ciidamada maamulka Somaliland maanta oo Isniin ahayd, sida uu sheegay mid kamid ah baarlamaanka Puntland.
Xildhibaan Maxamed Faarax Aadan (Can-jeex) iyo shan kamid ah ilaaladisii ayaa waxaa jidka u galay ciidamada Somaliland.
Xubin kamid ah baarlaamanka Puntland ayaa warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyay in xildhibaanka uu gacanta ugu jiro ciidamada maamulka Somaliland kadib markii ay jidka u galeen xilli uu marayay deegaan u dhow halka uu dagaalkii maanta ka dhacay.
Can-jeex ayaa sidoo kale soo noqday wasiir ku-xigeenkii cadaalada Puntland.
Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa maanta gelinkii hore ku dagaalamay deegaanka Booda-cade oo qiyaastii 35km kaga beegan dhanka galbeedka magaalada Dhahar.
Sida ay sheegayaan warar uu warsidaha Puntland Mirror ka helayo deegaanadaas ciidamo aad u badan oo gaashaaman oo ka socda Puntland ayaa gelinkii dambe ee maanta halkaas gaaray.
August 17, 2016 Ciidamada dowlada Puntland oo howlgalo amaanka ah ka bilaabay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland